शिल्पा र छविको अडानको अर्थ ! – Nepali Digital Newspaper
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 11 months ago July 17, 2019
एक भारतीय निर्माताले कुनैबेला भनेका थिए, ‘मुह मे चुना पोतने वालोंका कोही भरोसा नहीँ करना होगा ।’ उनको भनाइको आसय सिनेमामा काम गर्ने कलाकारको कुनै भरोसा हुँदैन भन्ने थियो । उनले आफ्नै कुनै कारणले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका भए पनि सो अभिव्यक्तिले वलिउडमा त्यतिबेला राम्रै चर्चा पाएको थियो । अर्थात्, प्रकारान्तरले उक्त अभिव्यक्तिको भावलाई सबैले स्वीकार गरेका थिए ।
वलिउड निर्माताको उक्त भनाइ यतिबेला निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच छेडिएको पारिवारिक लडाइँको प्रसङ्गबीच पुनः एकपटक सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको उजुरी बोकेर शिल्पा एकाएक प्रहरीको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि छवि र शिल्पाबीच महिनौँदेखि चल्दै आएको असमझदारी र विवाद छताछुल्ल हुन पुग्यो । छविले कानको जाली फुट्ने गरी चड्कन दिएपछि बाध्य भएर प्रहरीको शरण परेको अभिव्यक्ति शिल्पाले दिएकी छिन् भने आफूले त्यस्तो दुष्कर्म नगरेको जिकिर छविले गरेका छन् । ‘८ असारमा कुटपिट गरेको दाबी गर्नेले शिल्पा पन्ध्र दिनपछि मुद्दा हाल्न पुगेकी छिन्, उनको कुरामा कति सत्यता छ आफँै बुझौँ’ भन्ने तर्क छ उनको । तर ढिलो गरी उजुरी गरेकै आधारमा उनले शिल्पामाथि हात हालेनन् होला भनी पत्याउन मिल्दैन ।
यसअघि तीन–तीन पत्नी व्यहोरिसकेका छवि ओझाको छवि श्रीमतीसँगको व्यवहारको मामलामा नराम्रोसँग खराब भइसकेको छ र पनि शिल्पालाई फकाएर घर फर्काउन उनी उद्यत् देखिएका छन् । ५५ वर्ष पूरा भएका छविले जीवनमा अब अर्को बिहे नगर्ने प्रण गरेका छन्, शिल्पालाई नै घर फर्काउने, नसके एक्लै जीवन बिताउने बताएका छन् । उता शिल्पा अब कुनै हालतमा छविसँग बस्न नसक्ने र कुनै पनि बेला आफ्नो हत्या हुन सक्नेसम्मको ठहरमा पुगेकी छिन् । छविले मारेरै छोड्ने धम्की दिएको गम्भीर आरोप उनले लगाएकी छिन् । अब डिभोर्सबाहेकको विकल्प आफूसँग नरहेको उनको एकसूत्रीय भनाइ छ ।
यसरी श्रीमान्ले घर फर्काएरै छोड्ने, डिभोर्स नदिने र श्रीमतीले चाहिँ कुनै हालतमा घर नफर्किने, डिभोर्स नै गर्ने भनी आ–आफ्नो अडान चर्काइरहेकै बेला छवि र शिल्पा दुवैलाई राम्रैसँग चिनेजानेकाहरूबीच बेग्लै कानेखुसी चल्न थालेको बुझिन्छ । एउटाले छोड्दैनछोड्ने र अर्कोले अब सँगै बस्दैनबस्ने भनी अडान लिनुको आ–आफ्नै मकसद रहेको बुझाइ छ उनीहरूको । ती सिनेकर्मीहरूका अनुसार शिल्पाले छविसँग जीवन गुजार्ने हिसाबले विवाह गरेकै थिइनन्, दुई–चार वर्ष उनलाई अलमल्याएर सिनेमा क्षेत्रमा पाउ जमाउने र डिभोर्स गरी आफ्नो अंश–सम्पत्ति लिएर अर्कै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट भित्रभित्रै प्रेरित थिइन् उनी । शिल्पाको यही मकसद बुझेर नै छविले कुनै हालतमा डिभोर्स नदिने बरु एक्लै बस्ने प्रण गरेका हुन् । ‘गाँठ भी गुमाना बेवकुफ भी बनना’ भन्ने उक्तिलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ हुन नदिने अठोटमा उनी पुगेका छन् ।
सिनेक्षेत्रमा अनेक अनुमान र अफवाह चल्ने हुनाले शिल्पामाथि गरिएको यो अनुमान स्वाभाविक जस्तो लागे पनि यथार्थभन्दा धेरै पर हुन पनि सक्छ । उमेरका हिसाबले अनमेल विवाह, त्यसमाथि दिनहुँ शारीरिक हिंसा सहेर खाउँ–खाउँ र लाउँ–लाउँको उर्वर उमेरमा छविसँग कसरी दिन कटाउन् शिल्पाले ? यी दुईबीचको असमझदारी कुन मोडमा पुगेर टुङ्गिने हो– केही समय प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।